Njani kunye Nini ukuya kwiShift Gears kwiSithuthuthu
Iingcebiso malunga nendlela yokuqhuba ibhokisi lebhokisi yebhokisi
Enye yeempawu ezinzima kakhulu zokufunda ukukhwela isithuthuthu yindlela yokutshintsha iigesi. Lo msebenzi uneza uluhlu lwezinto eziyinkimbinkimbi kulabo baqhelanise nendlela yokuqhuba imoto yokuhambisa imoto kwaye ingaba nzima kakhulu kubagibeli abatsha abanamava amaninzi anokuthunyelwa kweencwadi. Kodwa ungesabi: ukutshintsha ibhayisikili kunokulula ngokuziqhelanisa kwaye kulula kunokuba kubonakala.
Iziseko zeeGeyile zeGears
Kukho ukulawula ezintathu ezisisiseko zokusebenza xa ushintshisa isithuthuthu: 1) i- throttle , 2) i- clutch , kunye ne-3) umkhethi wezinto . I-throttle ibuyisela injini, i-clutch engages kwaye ichithekisa ukuhanjiswa, kunye nomkhethi wezinto, ngokuqinisekileyo, ukhetha i gear. Thabatha i-clutch kuwe ngokusebenzisa isandla sakho sobunxele, kwaye unokuyibuyisela injini ngaphandle kokuhambisa ibhayisikili phambili. Kodwa khululwa i-clutch ngelixa uhanjiswe "kwinqwelo" (oko kukuthi, kungekho nto), kwaye uya kutshintsha ibhayisikili phambili.
Ikhethini yegesi ikhethwe ngokuchofoza iqhosha ngeenyawo zakho ezisekhohlo, kwaye ngokuqhelekileyo ibhalwe ngolu hlobo lulandelayo:
6 gear (ukuba ikhona)
I-Motorcycle Shifting Technique
Inkqubo yokuguqulwa ngokufanelekileyo idinga ukulandelelanisa okulandelayo ukuba kwenziwe ngokufanelekileyo nangokuzikhethela:
Ukwahlula i-clutch (usebenzisa isandla sakho sobunxele ukuba usikrelele kuwe)
Ukukhetha i gear efanelekileyo usebenzisa i-shift lever (ngeenyawo zakho ezisekhohlo)
Khangela kancane injini (ukujibiliza i-throttle ngesandla sakho sokunene)
Ngokukhawuleza ukukhulula i-clutch (kwaye "ingena" ngokukhawuleza)
Ukuqokelela umbhobho ngenkathi ukhulula i-clutch, eya kukhawulezisa ibhayisikili
Ukubukela injini ukwenzela ukukhawuleza kude kubekho olunye utshintsho olufunekayo
I-mechanics yokutshintsha isithuthuthu ilula nje ngalawo mathathu amanyathelo, kodwa ukwenza oko kufuneke kubekho ukusebenza ngokubanzi.
Yazi iilawuli zakho ngaphakathi nangaphandle, kwaye uzive ukuba zisebenza njani. Ziqhelanise ukukhwela kwindawo efana nokupaka okushiyiweyo, ngoko akufanele ujongane neendlela okanye ezinye iziphazamiso. Kwaye kubaluleke kakhulu, hlala ukhuselekile kwaye uqaphele ngexesha lwenkqubo yokufunda ukuze ukwazi ukugxila yonke ingqalelo ekusebenzeni.
Mhlawumbi uya kufumana ukuba ukutshintsha isithuthuthu kunzima kunokuba kuve Emva kokuba uvakalelwa ukuba kuphi kunye nendlela i-clutch disengages ngayo, ingaba i-throttle iyimfuneko kangakanani ekunyuseni ngokukhawuleza, kwaye uninzi kangakanani umgudu ofunekayo, yonke inkqubo iya kuba lula kwaye idinga ingxininiso encinane.
Nazi ezinye ezimbalwa imibuzo kunye nezimpendulo malunga nokutshintsha:
Umbuzo: Ndingayazi njani ixesha lokutshintsha iigesi?
A: Ayikho i-equation yemathematika yeendawo zokutshintsha eziphezulu. Ukuphakama okuphezulu akudingekanga kwiimeko ezininzi zokugibela kwendlela, kwaye kufuneka kuphephe ngokuqhelekileyo, njengoko kufanelekile ukutshintsha ngokukhawuleza ukuba injini ayikwazi ukuvelisa amandla okwaneleyo ukwenzela ukukhawuleza okwaneleyo. Ngokuqhelekileyo, indawo emnandi ye-powerband ye-injini (apho ivelisa i-torque ngokwaneleyo ukubonelela ngokukhawuleza ngokukhawuleza) yinjongo apho ezininzi iinjinjini "zifuna" zitshintshe. Ngenxa yokuba iinjini zihambisa amandla azo asebenzayo kwii-RPM ezahlukileyo, kufuneka uhlakulele kwaye usebenzise isistim sakho ukuba ugqibe isigqibo sokuba nini ixesha lokutshintsha.
Umbuzo: Ndingayifumani nxaxheba?
Ukufumana ukungathathi hlangothi ngenye yeengxaki eziqhelekileyo ezijongene nabagibeli abatsha. "Ukufumana" ukungathathi hlangothi kunokuthatha umgudu ongakumbi ngeebhokisi zeegama, kodwa umonde omncinci kunye nomnxeba omnene wenza ukuba lula kube lula. Mva kancinci ukuhla kwehla ukusuka kwinqanaba lesibini, ngelixa uthabatha i-clutch yonke indlela. Ukuba awukothi i-clutch yonke indlela, kunokuba nzima ukuba ungathathi hlangothi. Khangela ipaneli yecandelo lokukhanya okungekho hlangothi, ngokuqhelekileyo kuluhlaza okombala. Ukuba uhamba phambili ungathathi hlangothi kwaye ungena kwindawo yokuqala (leyo yingxaki eqhelekileyo), sebenzisa umda webhoot yakho ukuze ungasebenzisi utyinzelelo oluninzi kwi-shifter. Ngokuziqhelanisa ngokwaneleyo, uya kuziva ukuba ungathathi hlangothi ngaphandle kokucinga ngako.
Umbuzo: Ndingakwazi njani ukutshintsha ngakumbi?
A: Indlela efanelekileyo kakhulu yokutshintsha ngokukhawuleza kukunyamekela ukuziphatha kwebhayisikili yakho: ukuba isithuthuthu sakho sigxina ngelixa uvumela i-clutch, mhlawumbi uhamba ngokukhawuleza ngesandla sakho sasekhohlo.
Ukuba uhamba phambili ngexesha lokutshintsha, unokuba usebenzise iminyango enkulu. Kwaye ukuba isithuthuthu sakho sitshintsha ngexesha lokutshintsha, unokuthi ungayi kubuyisa injini ngokwaneleyo phakathi kweenguqu zendawo, okuya kwenza injini ithintele i-bike. Ukuguquguquka ngokukodwa kukuthe ngqo ngokuqwalasela indlela i-clutch, i-throttle, kunye ne-selector gear echaphazelekayo, kunye nokucwangcisa abathathu.
Umbuzo: Ndingayicotha njani ukukhanya okubomvu okanye uphawu lokuyeka?
A: Ngenxa yokuba isithuthi ngasinye sisebenza ngaphakathi kwinqanaba elithile lezantya, kuya kufuneka ukuba uhlasele phantsi njengoko uhlawule. Masithi uhamba nge-50 mph kwi-gear yesi-5 kwaye kufuneka ufike kwi-stop stop. Indlela efanelekileyo yokunciphisa i-downshift njengoko ugxininisa, ukhetha i-gear engezantsi uze ukhuphe i-clutch ngenkqu revs. Ukwenza oko akuyikukuvumela kuphela ukusebenzisa i-injini ye-injini ukuze uncede uhlawule, kuya kukunceda ukuba ukhawuleze kwakhona xa kukhanya kutshintsho okanye ukuba izimo zendlela zitshintshile kwaye ukuyeka akusekho mfuneko. Ukuba ufika kwisigxina esipheleleyo, kungcono ukutshintshela ukungathathi hlangothi, ubambe i-brake, kwaye uguqulele kwi gear yokuqala ngaphambi kokuba ulungele ukuya.
Umbuzo: Kwenzekani ukuba ndidibe?
A: Musa ukuxhalaba xa ugcina isithuthuthu sakho, kodwa thabatha amanyathelo okuqala ukuhamba ngebhayisikili kwaye uhambe. Ukuhlala uhleli xa i-traffic ihamba ngokukhawuleza iyingozi, ngoko uya kufuna ukukrazula i-clutch, uqale isithuthuthu, utshintshe kuqala kwaye uhambe ngokukhawuleza.
Umbuzo: Ngaba kulungile ukuweqa iigesi?
A: Ukuba unqwenela ukukhupha phezulu kodwa unqamle i-gear, ukwenza njalo kuya kubangela ukuba kubekho izinga elilinganayo lokukhawuleza (nangona ukutshintshwa kwento nganye kuya kuthatha ixesha elide). Nangona oku kungabi yindlela ehamba phambili yokukhwela, ukwenjenjalo ngamanye amaxesha ungasindisa igesi ukuba kwenziwe ngokufanelekileyo.
Umbuzo: Ngaba ndimele ndihambe ngesithuthuthu ngeegesi xa ndiyibeka?
A: Kulungile ukushiya isithuthuthu sakho ngokungathathi hlangothi xa upakishwe kwinqanaba lomgangatho, kodwa ukuba uhamba ngokupaka, ukushiya kwisitya (mhlawumbi i-1st) kuya kugcina ukuphuma kwindawo yokuma okanye kwindawo yokuma.
Ukucwangcisa Uhambo Olukhulu lweNdlela
Funda indlela yokusebenzisa i-front and afterar Motorcycle Brakes
Ukuthutha i-Bike yakho yaseBlue
Kutheni Uhamba Ngesithuthuthu?
Iikhuphe ezili-10 ezihamba phambili zakha
Iipropati ezili-10 ezikhulu kuninzi-dolophu e-United States
I-Vice-President we-United States: Imisebenzi kunye neenkcukacha
I-Cuál is la diferencia phakathi kwe universidad y yunivesithi e-EEUU
Inkcubeko yeShayina Ibujonga Njani Inja?
Uhlobo lweNtsapho yaseRandy Orton
Umkhwa Wemibala Emnyama Nengqunga, iArgantia argiope
Indlela Yokuba Ngummeli Wokulwa Nobuhlanga
Haïr - ukuzonda
Indlela yokusebenzisa imiyalelo yokunyuka
Izinto ezinokumangalisayo ozifundayo kuTrevor Noah "Ozalwe ulwaphulo-mthetho"
Funda i-Conjugations ye "Reduce" (ekunciphiseni)
Ukulungiselela Ukusingatha iReiki Share
Iimpawu neeMotif kwiNcwadi
Ezinye iingcamango malunga ne-Stargazing
Elula "Umnikeli" (Ukunika) Iingcamango zesiLwimi zesiFrentshi
Iyintoni intsingiselo ye Shomer?